Realme3Pro အတွက် Dark Mode နဲ့ Game Optimization ရပြီ – DigitalTimes
Realme က3Pro အတွက် Software Update ဖြန့်ချိပေးလိုက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါလာပါတယ်။ သိပ်မမိုက်တဲ့ အရာတွေကို ဖယ်ရှားထားပြီး အဆင့်မြှင့်တင်တာတွေ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ အတွက် Security Patch, Dark Mode တွေ ထည့်ထားပါတယ်။ Charging Animation အသစ်နဲ့ SIMs တွေကို လွယ်ကူစွာ ပြောင်းနိုင်အောင် Notification Center မှာ Toggle ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Changelog အပြည့်အစုံကို အောက်မှာ ရှိုးပါ။
● Android security patch: October 2019
•	Added Dark Mode.
● Updated charging animation.
● Added fast switch toggle between SIM in the notification center.
● Removed the reminder when the hotspot is enabled.
● Removed the prompt when the phone is rooted.
● Added option to swipe down on the home screen for global search or notification center.
● Added Realme Laboratory.
● Added option for notification dots for updates.
● Updated firmware version to optimize the gaming experience.
ဧပြီလမှာ Realme3Pro ကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Realme3Pro မှာ ၆.၃ လက်မ Full HD+ Screen , Snapdragon 710 Chipset များ ပါပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာ 16MP+5MP Dual Camera များ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Realme3ရဲ့ 13MP Camera ထက် ပိုကောင်းတဲ့ 25MP Selfie Camera ပါပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာလက်ဗွေရာ ကိရိယာ မြှပ်နှံထားပါတယ်။
4/64 GB, 6/64 GB, 6/128 GB များ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ 256GB အထိ ဝင်ဆန့်တဲ့ microSD Card စိုက်နိုင်ပါတယ်။ Android Pie အခြေပြု Color OS 6.0 မောင်းနှင်ထားပါတယ်။ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးပေးနိုင်တဲ့ Chroma Boost နဲ့ အလင်းရောင် နည်းပါးချိန်များမှာ အလန်းစား ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးပေးနိုင်တဲ့ Nightscape Mode များ ပါပါတယ်။ 960fps HD Slo-mo Video များ ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘက်ထရီက 4045mAh ဖြစ်ပါတယ်။ Realme ဟာ OPPO ရဲ့ လက်အောက် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် OPPO ရဲ့ လျှင်မြန်စွာ အားသွင်းစနစ် VOOC 3.0 ပါလာပါတယ်။ 20W Charger ထည့်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် micro USB Port သာ ပါတာက ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ မဖြစ်သင့်တော့ပါဘူး။ အညို၊ အပြာနဲ့ ခရမ်းရောင်များ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ 4/64GB ကို ၂၀၀ ဒေါ်လာ နဲ့ 6/128GB ကို ၂၄၅ ဒေါ်လာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Vivo S5 ကို မော်ဒယ် ၂ မျိုးထုတ်လုပ်ထားနိုင်